Muse Biixi in uu A/rahman Ciro higsadaa wa u doqn niimo Abdi Mustafe‏
Muse Biixi in uu A/rahman Ciro higsadaa wa u doqn niimo Abdi Mustafe‏ 0 July 09, 2015 in Articles by somalilandlive Staff Visits: 1365
Muse Biixi in uu A/rahman Ciro higsadaa wa u doqn niimo Abdi Mustafe‏ Muse Biixi in uu A/rahman Ciro isku dhereriyaa wa u doqn niimo. Muse
oo Silaanyo madiidin u ah oo sidii la doono laga yeelo oo loola dhaqmo sidii madowga maraykanka lagugumaysan jiray ayaa is mooday in uu A/rahman Ciro la heer yahay oo soo anbaday. A/rahman Ciro ama madaxweyne
ha noqdo ama yuu noqon ee waa ninkaa kor u kaajay ee xisbiga sameeyey Waddani. Muse na makhaayad nin kale leeyey ayuu shubayaa oo aannu wax arin ah ku lahayn marka la doonana dibada loo tuurayaa. Muse xisbiga uu ka tirsanyay waxa loogu magac daray wiil Silaanyo dhalay oo Kulmiye la yidhaa . Waa xisbi reer leeyey. Muse wuxuu fahmi waayay waar xisbigan iskama soo dhex sharixi kartid ee waa lagugu guurayaa.Muse waxa lagu qabsaday sideed uuga fikirtay Kulmiye ayaan musharax ka noqonayaa oo waatii la ogaa ilmada ka qubatay. Cilmi boodhari wuxuu yidhi: Abtiyaday bayii egeydinaan adeecaa... waa mar reer abtigii Cilmi ku yidhaahdeen anagaa gabadh ku siinayna ee Hodan iska ilow... Muse waxay ahayd in uu tolkii raaco markii madaxtooyada lagu dhex bahdalay ee lagu yidhi hadal oo warbaahinta ka sheeg in aanad ka fikiri doonin in aad musharax tahay ee isagoo bahdalan uu yidhi waan uuga hadhay Silaanyo. Maalintaa haduu tolkii raaci lahaa uu odhan lahaa Silaanyo adna musharax noqon maysid oo
ay Ucid ku biiraan isaga iyo beeshiisu wax buu iska celin kari lahaa. Muse wuxuu duliga u dugsado lama yaqaan.